Ny lahatsoratr'i Tom Siani momba ny Martech Zone
Lahatsoratra nosoratan'i Tom Siani
Fotoana famakiana: 5 minitra Fantatrao ve ny maha-zava-dehibe ny varotra horonantsary amin'ny fisian'ny Internet amin'ny orinasanao trano? Tsy maninona ianao mpividy na mpivarotra dia mila mari-pahaizana marika mendri-kaja sy mendri-kaja ianao hisarika ny mpanjifa. Vokatr'izany, masiaka loatra ny fifaninanana amin'ny varotra trano ka tsy afaka manatsara ny orinasanao kely ianao. Soa ihany, ny varotra niomerika dia nanome orinasa isan-karazany manana lafin-javatra ilaina mba hanatsarana ny marika. Ny marketing video dia
Infographic: Ahoana ny fiantraikan'ny tambajotra sosialy amin'ny fiainantsika
Alarobia, Oktobra 28, 2020 Talata, Oktobra 27, 2020 Tom Siani
Fotoana famakiana: 2 minitra Androany ireo sehatra media sosialy dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fiainantsika. Olona an'arivony tapitrisa eran'izao tontolo izao no mampiasa azy ireo hifampiresaka, hiala voly, hifaneraserana, hiditra amin'ny vaovao, hikarohana vokatra / serivisy, fivarotana sns. Tsy zava-dehibe ny taonanao na ny fiavianao. Ny tambajotra sosialy dia hisy fiantraikany betsaka amin'ny fanaonao isan'andro. Azonao atao ny manatona olona manana fahalianana mitovy aminao ary manangana finamanana maharitra na dia tsy fantatra anarana aza. Azonao atao ny mangoraka olona maro hafa